IHamlet kunye noMnquma Hamlet kunye noMnquma
Sindong-myeon, Chuncheon, Gangwon Province, South Korea
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguTaehwan
Esi sisakhiwo sosapho olunye esibekwe kwinduli yeNtaba iGeumbyeong ngasemva kweKim Yu-jeong Munhak Village, apho iqela elinye lihlala usuku.
Umandlalo womqhaphu oyi-100% kunye neetawuli ezibilisiweyo zinikwe ivumba lelanga xa uvasa ngalunye. Yindawo yokuhlala eqaqambileyo enokukhanya kwelanga okuninzi ngeefestile ezinkulu. Kuba luhlobo lwesitudiyo esinebhedi ezimbini ezisecaleni ecaleni, yenzelwe abantu abadala aba-2, kwaye inokwamkela ukuya kuthi ga kwi-2 abantu abongezelelweyo kubantu aba-4 bebonke. Abantwana abaneminyaka emi-2 ubudala nangaphantsi (ukuya kutsho kwiinyanga ezingama-24) bahlala bekhululekile, akukho bhedi yongezelelekileyo banikwayo ukuba basimahla.
Inombono weNtaba yeSamak kwaye, ukuba imozulu ilungile, unokubona ukutshona kwelanga okubomvu, kunye nesidlo sakusasa esilungileyo sinikezelwa simahla.
Inkonzo yebarbecue ayibonelelwanga.
Asinalo ikhitshi, ngoko awukwazi ukupheka. I-microwave kunye nembiza yekofu ziyafumaneka.
Ikwayindawo elungileyo yokusebenzisa izithuthi zikawonke-wonke njengoko iluhambo lwemizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo saseGimyujeong kumgca weGyeongchun.
Ungawonwabela umoya weGyeongchun Line yakudala kwiGangchon Rail Bike kwaye uzive ubuhle boMlambo iBukhan, okanye uthathe ukhenketho lwenkcubeko ngokundwendwela 'Kim Yujeong Literature Village' kunye 'neeNcwadi kunye neMyuziyam yoShicilelo'. Intaba yeGeumbyeongsan, ethandwa ngabemi baseChuncheon, ikwinduli enendlela egangathiweyo emva kwayo, ukuze unyuke iNtaba yeGeumbyeongsan.
Nge-'Hamlet kunye ne-Olive' njengesiseko senkampu, unokundwendwela iindawo zabakhenkethi ezikufutshane zaseChuncheon, ezinje ngeChuncheon Sangsang Madang, iHongcheon Vivaldi, iSiqithi saseNami, iTempile yaseCheongpyeongsa, iLake Lake, iMyuziyam yeMipopayi, kunye neJukrim-dong Cathedral.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2
4.96 ·Izimvo eziyi-376
4.96 out of 5 stars from 376 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-376
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi376
Kim Yu-jeong Literary Village kunye nendawo yokuzalwa kukaKim Yu-jeong ingaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5, kunye neGangchon Rail Bike indawo yokuqala apho unokonwabela iHan River entle, kunye neMyuziyam yeNcwadi kunye nePrinta kukuhamba imizuzu eli-10. Njengoko indawo yokuhlala ikwindlela yokunyuka kweNtaba yeGeumbyeongsan, unokunyuka intaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Taehwan
Ukukhusela ubumfihlo beendwendwe, indawo apho umninimzi ahlala khona kunye nendawo apho iindwendwe zihlala zohluliwe.
Xa iindwendwe zidla isidlo sakusasa okanye zi-odole isidlo sakusihlwa, zijongana, kwaye kwimeko enjalo, unxibelelwano olusondeleyo lunokwenzeka, kodwa unxibelelwano olusondeleyo phakathi kwababuki zindwendwe kunye neendwendwe ekugqibeleni lukhetho kunye nokhetho lweendwendwe.
Xa iindwendwe zidla isidlo sakusasa okanye zi-odole isidl…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sindong-myeon, Chuncheon